डिआईजी उत्तमराज सुवेदी भन्छन्, त्यो दिन दिनेशलाई आशंका गरेर घरमै भेट्न पुग्दा….! – Jagaran Nepal
Jagaran Nepal बिहिबार, फाल्गुण ०६, २०७७
१३ वर्षीया निर्मला पन्तको घटना भएदेखि प्रहरीले धेरै आलोचना खेप्दै आएको थियो। एकाएक भागरथी भट्टको घटना सार्वजनिक भयो। यस घटनाको पनि दोषी पत्ता लगाउन नसके प्रहरीप्रति सर्वसाधारणको दृष्टिकोण के होला भन्ने चिन्ताले धेरै पिरोल्यो। मैले आफूलाई घटनाको केन्द्रमा राखेर अनुसन्धान गर्ने जमर्को गरें, जुन पीडा भागरथीकी आमालाई थियो।
हामीले विभिन्न शंकाले हेर्‍यौं। कतै सँगै पढ्ने साथीबाटै त यो घटना भएन भन्ने लाग्यो। अनुसन्धान त्यतातिर मोड्यौं। भागरथी कति बजे स्कुलबाट बाहिरिइन् ? उनीसँग कोको थिए ? यस्ता सूचना बटुल्दै जाँदा कक्षा ११ पढ्ने आरोपित छात्रको व्य वहार शं कास्पद देखियो। भागरथीको पछि–पछि दिनेश नै लागेको केही विद्यार्थीबाट थाहा भयो। यो रहस्य भागरथीको शव फेला परेको तेस्रो दिनदेखि खुल्यो।
अनुसन्धानका विभिन्न विधि हुन्छन्। जुन दिन म आफैं कुकुर लिएर घटनास्थल पुगें, त्यही दिन दिनेश घटनास्थलमा पुगेनन्। हामीलाई शंका त्यहीँ लाग्यो। घरमा पनि उनले डराएजस्तो व्यवहार गर्ने र छ’ट्प’टाउने गरेको पाइयो। फागुन ३ गते दिनेशलाई सम्झाइबुझाइ केरकार गर्दा बल्ल घटना स्विकारे। उनले पुरानो रिसइबीका कारण यस्तो गरेको बताए। अन्य प्रमाणले पनि उनी नै आरोपी हो भन्ने संकेत गरेपछि हामी निक्र्योलमा पुग्यौं। यो घटनामा उनी नै संलग्न हो भन्ने पुष्टि भयो।
पोस्टमार्टम रिपोर्टले भागरथीको घाँ /टी थि /चेर ह /त्या भएको र यौ’नस/म्प/र्क/समेत भएको देखाएको थियो। हामीले प्रहरीकै विधिविज्ञान प्रयोगशालामा शव, कपडा र शरीरका विभिन्न भागमा लागेका चो/टको नमुना पठाएका छौं। त्यसको रिपोर्ट आएपछि थप प्रमाण बलियो हुन्छ। आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ ।